Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafampana Aostralianina » COVID-19 Delta Variant miakatra ambonin'ny tany
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana Indonezia • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Japana • Vaovao Mafana Korea Atsimo • Vaovao Mafana Thailandey • Vaovao Mafana US • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Mandehana any amin'ny toerana izay tsy dia avo loatra ny fanaovana vaksiny, ary mety hahita toerana iray anaovan'ny COVID-19 Delta Variant ny lohany ratsy tarehy ianao ary miteraka fitomboan'ny tranga coronavirus indray.
Ny olana eo noho eo amin'ny Delta Variant dia ny areti-mifindra.
Amin'izao fotoana izao, ny Variant dia miakatra manerana an'i Azia amin'ity herinandro ity.
Any Aostralia sy Korea atsimo, ny aretin-koditra Variant dia mamely firenena maromaro hanamafisana ny protokolato indray rehefa mamporisika ny olom-pirenena hanao vaksiny.
Ny COVID-19 Delta Variant dia hita voalohany tany India tamin'ny Desambra 2020. Tao anatin'izay 6 volana lasa izay dia niitatra tamin'ny firenena manodidina ny 100 izy io. Vao haingana, ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) dia nampitandrina fa ny Variant dia mety ho lasa endrika lehibe indrindra amin'ny coronavirus.
Any amin'ny fanjakan'i New South Wales, Aostralia, ny fiakarana isan'andro lehibe indrindra amin'ny tranga vaovao hatreto tamin'ity taona ity. Ny valan'aretina farany farany dia nahatratra 200 ka ny ankamaroan'ireo tranga naterak'ireo Delta Variant. Sydney, fonenan'ny ampahadimin'ny mponina 25 tapitrisa ao amin'ny firenena, dia antsasaky ny làlana hidin-trano mandritra ny tapa-bolana mba hifehezana ny valanaretina, izay nampivadi-po ny manampahefana tao anatin'ny fivezivezena vaksiny nanerana ny firenena.
Aostralia, toy ny firenena maro hafa any Azia, dia nitolona tamin'ny famindrana olona satria ny fahombiazana voalohany nahitana ny areti-mandringana dia nanjary fisalasalana amin'ny vaksinina, ary ny mpanamboatra dia mazoto nandefa fatra. 6 isan-jaton'ny mponina fotsiny no vaksinin'i Aostralia, raha 12 isan-jato kosa no nanao vaksiny an'i Japon.
Miaraka amin'ny Lalao Olaimpika amin'ny fahavaratra amin'ity volana ity any Japon, ny Delta Variant dia manaloka ireo lalao. Raha ny tatitra dia saika ny ampahatelon'ny tranga rehetra any atsinanan'i Japon dia avy amin'ny Variant ary mety hahatratra 50 isan-jato amin'ny tapaky ny volana amin'ity volana ity. Tokyo sy ny prefektiora telo mifanila aminy no mahita fa misy loza tampoka noho ny firongatry ny aretina coronavirus farany teo. Nilaza ny governoran'i Tokyo Yuriko Koike fa mety hisy ny fandrarana ny mpijery hanatrika ny Lalao Olaimpika kasaina hanomboka amin'ny 23 Jolay raha mitombo hatrany ny isan'ny tranga.
Any amin'ny faritra hafa any Azia
In Thailand, manokana any Phuket, ity toerana fizahan-tany malaza ity dia nosokafana ho an'ireo mpitsidika vita vaksiny feno. Amin'izao fotoana izao ny Alpha Variant izay notaterina voalohany tany Angletera dia mbola ny variant manjaka ao Thailand. Na izany aza, nilaza ny manampahefana Thailandey fa antenain'izy ireo fa handray an-tanana ny Delta Variant ho tranga matanjaka notaterina tao anatin'ny volana vitsivitsy. Thailand dia nanatri-maso ny andro fahatelo nisesy ny fahafatesan'ny olona noho ny COVID-19. Na izany aza, nitantara ny andro fahatelo mahitsy tamin'ny fahafatesan'ny coronavirus i Thailandon zoma. Ny variant Alpha, izay hita voalohany tany Angletera, dia mbola ny variant domant ao amin'ny firenena, na dia nilaza aza ny manampahefana fa manantena ny Delta variant hanjaka mandritra ny volana vitsivitsy.
In Korea Atsimo, ny trangana virus coronavirus dia tampon'isa 800, izay avo indrindra tao anatin'ny 6 volana. Ny salanisan'ny aretina vaovao eto amin'ny firenena dia nitombo tao anatin'ny 10 andro lasa, ary ny manampahefana any Seoul dia nanemotra ny fepetra fitsangatsanganana sosialy. Ny firenena dia manana tahan'ny vaksiny hatreto ambanin'ny 10 isan-jato.
In Indonezia, nanomboka androany ny fepetra vonjy taitra noho ny fiakaran'ny tranga COVID-19 miaraka amin'ireo fepetra andrasana hijanona eo amin'ny toerany farafaharatsiny hatramin'ny 20 Jolay.
In India, mifantoka amin'ny lamesa ny governemanta vaksiny ho setrin'ny fiakaran'ny vidim-piainana goavana mandritra ny volana Mey sy Jona.
Ny fiakarana amina tranga vaovao any Eropa dia nametraka ny fizahan-tany amin'ny fahavaratra eo ambanin'ny rahona mainty na eo aza ny fananganana taratasy fanamarinana fizahan-tany COVID-19 Vondrona Eropeana izay antenaina handrisihana hetsika fivezivezena bebe kokoa. Britain koa dia manatri-maso tranga Delta Variant misimisy kokoa, saingy na eo aza izany, mikasa ny hamerana ny famonoana ny fiainana ny firenena manomboka ny 19 Jolay. Nilaza i Alemanina omaly fa manantena ny hampiakarana hatramin'ny 80 isanjaton'ny tranga vaovao amin'ity volana ity izy. Any Portiogaly, napetraka ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina.
Etazonia dia nahita koa ny fiakaran'ny aretina Delta Variant any amin'ny faritra maro amin'ny firenena izay mbola ambany ny tahan'ny vaksiny. Nilaza ny filoham-pirenena amerikana Biden, omaly, fa handefa fanampiana manokana amin'ireo toerana mafana amin'ny fitomboan'ny aretina ireo ny governemanta.